Dhaabataalee Caancalaa Saaguu fi Gulaaluu
Dhaabataalee caancalaa keewwata ammee sarartuu sardala irraatti ilaaluu ni dandeessa. Dhaabataalee caancalaa jijjiiruu yoo barbaadde, jalqaba irratti hamma dhaabataalee caancalaa itti jijjiiruu barbaadu akka kana gadiitti hubannoo keessa galchuu qabda:
Akkaataa Keewwataa ammee fayyadamuun keewwatoota hundaaf dhaabataalee caancalaa jijjiiri: Baafata halqara banuuf, keewwata mirga cuqaasiiti, Akkaataa Keewwataa Gulaali filadhuuti, Caancaloota cuqaasi.
Keewwata tokkoo fi tokkoo ol ta'aniif dhaabataalee caancalaa jijjiiri: Keewwatoota filadhuuti sarartuu keessa cuqaasi.
Kan kan gadii keessattti, hojoolee kan olitti caqasaman hundaaf ajajaalee barbaaduu ni dandeessa.
Dhaabata caancalaa qindeesuu yoo barbaadde sarartuu irraatti cuqaasuu ykn Dhangi - Keewwata - Caancaloota filuu ni dandeessa. Toftaan lammeenu keewwata ammee ykn keewwatoota filataman hunda dhiibbessa.
Caancala bita qixxeessi qindeessuuf sarartuu cuqaasi. Baafata halqara kan keessatti akkaakuu caancalaa jijiruu dandeessu ilaaluuf sajoo caancalaa kan sarartuu irraa mirga cuqaasi.
Caancaloota kurnyee hedduu wal jalaa bodaan qindeesuuf, sajoo gara harka bitaa sarartuu ti argamu hanga akkaakuun caancalaa barbaadamu mula'tutti cuqaasi, sanaa booda sarartuu irratti cuqaasi.
Caancaloota bitaa qindeessuu
Caancaloota mirgaa qindeessuu
Caancaloota kurnyee qindeessuu
Caancaloota wiirta'aa qindeessuu
Qaaqa Keewwata banuuf safartuu lama cuqaasi.
Caancala tokko qindeessuuf, bakka adii safartuu lama cuqaasi. Qaaqaan Keewwata, fuula caancala Caancaloota baname waliin mul'ata.
Caancaloota Safartuu irra Siiqsuu
Hantuutee fayyadamuun dhaabataalee caancalaa kophaa safartuu irra siiqsi.
Dhaabataalee caancalaa safartuu irra siiqsuuf, caancala cuqaasuuke dura furtuu Shift dhiibi. Caancala sana fi caancaloota hunda gara harga mirgaa isaatti argaman siiqauuf, furtuu Shift utuu dhiibaa jirtuu caancala tokko harkisi. Addaan fageenyi caancaloota kana gidduu jiru kan duraa irraa hin jijjiiramu.
Caancala sana fi caancaloota hunda gara harga mirgaa isaatti argaman siiqauuf yoo caancala safartuu irra harkistu, Ajaja Ctrl dhiibi. Kuni addaan fageenya caancaloota gidduu jiru fageenya muudana irraa gitaa'aa akka jijjiiramu godha.
Amaloota Caancaloota Jijjiiruu
Akaakuu caancalaa jijjiiruuf, safartuu irraa caancala jijjiiruu barbaaddu cuqaasi, sanaa booda baafata halqara banuu barbaaddu mirga cuqaasi.
Caancala haquuf, qabduu hantuutee gad qabiiti utuu hin gadhiisiin caancalicha safartuu alaan harkisi.
Qindaa'inoota dhaabataalee caancalaa kee jijjiiruuf yoo barbaadde, odeeffannoo dabalataa Meeshaalee - Dirqalaalee - LibreOffice Writer - WaliigalaMeeshaalee - Dirqalaalee - LibreOffice Calc - WaliigalaMeeshaalee - Dirqalaalee - LibreOffice Draw - WaliigalaMeeshaalee - Dirqalaalee - LibreOffice Impress - WaliigalaMeeshaalee - Dirqalaalee - (maqaa mojuulii) - Waliigala jalatti argatta.
baafata halqaran sarartuu akka Safartuu. Jijjiirraan kuni kan gataa'aan hanga ati LibreOffice baatuutti qofaa dha.fi sarartuu kan ati baafata halqaraa jijjiirra itti goote qofaaf hojii irra oola tti qofaa dha.Yuunitii safara safartuu dhaabbataatiin jijjiiruu yoo barbaadde Meeshaalee - Dirqalee - [Gosa Galmee] - Mul'annoo filiiti yuunitii safaraa achii jijjiiri.
Title is: Dhaabataalee Caancalaa Saaguu fi Gulaaluu